Wi-Fi enweghị ezigbo nhazi IP - Nchọpụta nsogbu | Nzukọ mkpanaaka
Wi-Fi enweghị ezigbo nhazi IP - Nchọpụta nsogbu
Edere Ferreno | 16/05/2022 13:00 | Internet
Njikọ WiFi anyị nwere ike ịta ahụhụ ụdị nsogbu ọ bụla. Otu n'ime ihe kachasị mara maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ mgbe anyị nwetara ịdọ aka ná ntị na-ekwu na WiFi enweghị nhazi IP dị irè. Nke a bụ nsogbu na-egbochi anyị iji njikọ WiFi n'oge ahụ, ya mere ọ dị mkpa na anyị nwere ike dozie ya ozugbo enwere ike.
Nke a bụ mperi nke ndị ọrụ Windows nwere ike nweta ihe karịrị otu oge. Ihe ọtụtụ ndị na-ajụ bụ ihe a ga-eme mgbe ozi a pụtara na kọmputa. Ọ dabara nke ọma, ma ọ bụrụ na a gwara anyị na WiFi enweghị ezigbo nhazi IP, e nwere usoro ngwọta nke anyị ga-enwe ike ịnwale na nke a.
Mgbe ahụ, anyị na-aga kwuo banyere ngwọta ndị a nwere ike itinye n'ọrụ. N'ụzọ dị otú a, a ga-edozi njehie a na kọmputa, na njikọ WiFi na anyị ga-enwe ike jikọọ na ya ọzọ na-emekarị. Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị maralarị, nsogbu a, mana ihe ngwọta bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ amaghị. Ozi ọma ahụ bụ na ndị a bụ ngwọta dị mfe nke onye ọ bụla nwere ike itinye.
1 Gịnị ka ozi a na-egosi
2.1 Megharia adreesị IP ahụ
2.2 Tọgharịa TCP/IP
2.3 Wepụ ọkwọ ụgbọ ala ikuku ikuku
2.4 Jiri aka hazie IP
Gịnị ka ozi a na-egosi
Mgbe anyị nwetara ozi mperi a, ọ bụ ihe nkịtị na ozi a na-egosi ma ọ bụ na-egosi na enwere TCP/IP nsogbu nke kọmputa a na-ekwu. Nke a bụ usoro nke netwọk protocol Layer nke nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ na-adịghị mma, nke mere na njikọ ma ọ bụ ọrụ na Ịntanetị kwụsịrị, ya bụ, anyị enweghị ohere ịntanetị na nke a.
Nke a bụ ozi mperi nke nwere ike ịpụta mgbe ụfọdụ na Windows. Isi nsogbu bụ na mgbe na Windows na-agwa anyị na WiFi enweghị ezigbo nhazi IP, a naghị enye anyị ngwọta ọ bụla. Sistemu arụ ọrụ na-agwa anyị naanị na achọpụtala nsogbu a, mana ọ naghị enye anyị azịza ọ bụla ma ọ bụ chọọ azịza ya. Yabụ na anyị bụ ndị ga-eji aka chọta azịza ya.
Enwere ọtụtụ ihe na-akpata nsogbu a na kọmputa anyị. Site na netwọk na-ezighi ezi, ntọala netwọk ezighi ezi, nsogbu ngwaike, okwu netwọk onye ọrụ netwọk, yana ọrụ netwọk Windows nwere nkwarụ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, n'okpuru anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ndị a ngwọta na anyị nwere ike na-agbalị.
Ebe ọ bụ na mmalite nke mmejọ ahụ nwere ike ịdị iche iche. ị ga-anwale ngwọta dị iche iche na kọmputa. O yikarịrị, otu n'ime ndị egosiri n'okpuru ga-enyere gị aka ịkwụsị ozi njehie a na Windows na njikọ WiFi ga-arụkwa ọrụ ọzọ. Ndị a abụghị nnọọ mgbagwoju ngwọta, n'ihi ya, n'ihi na ọtụtụ ọrụ ọ kwesịrị ịbụ ihe bara uru na nke a na ihe na ha ga-enwe ike ime na ha na kọmputa.
Ha bụ ngwọta nke enwere ike itinye n'ọrụ n'agbanyeghị mmalite nke ọdịda a na kọmputa. Yabụ na ndị ọrụ niile nọ na Windows nwere nsogbu a na nhazi IP nke na-egbochi ha ijikọ na ịntanetị ga-enwe ike ịkwụsị ya. Ndị a bụ azịza kachasị mma anyị nwere ike itinye na kọmputa:
Megharia adreesị IP ahụ
Nke a bụ otu n'ime ngwọta kachasị mfe, mana nke na-arụ ọrụ kacha mma. Emegharia adreesị IP nwere ike ime ka kwuru ọhụrụ nhazi irè, nke mere na anyị nwere njikọ Ịntanetị ọzọ. Nke a bụ ihe anyị ga-enwe ike ime site n'ịme iwu na ngwa ngwa na Windows.
Ya bụ, anyị na-ebu ụzọ mepee iwu ozugbo, ihe anyị na-eme site n'ịpịnye iwu ozugbo n'ime ebe a na-achọ ihe na taskbar kọmputa. Anyị wee pịa aka nri na iwu ozugbo. Na nhọrọ ndị na-apụta, anyị na-aga họrọ ọsọ dị ka onye nchịkwa, yabụ anyị ga-enwe ohere nchịkwa na nke a.
Na windo iwu mepere emepe, tinye iwu ipconfig /release wee pịa Tinye. Mgbe ahụ, anyị ga-eji iwu ipconfig / megharia ọhụrụ na njikwa iwu a. Ị ga-edobe oghere na abụọ, ọ dị mkpa. Mgbe itinyere iwu ndị a, pịnye ọpụpụ wee pịa Tinye. Mgbe ahụ, ịmalitegharịa kọmputa gị na n'ọtụtụ ọnọdụ, emegharịrị adreesị IP a, ya mere edoziwo nhazi a na-adịghị mma.
Tọgharia TCP / IP
Nke abụọ ngwọta na-ejekwa ozi kwụsị igosi ozi na-ekwu na WiFi enweghị ezigbo nhazi IP na Windows. Dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-emepe windo ozugbo iwu, ihe anyị ga-eme dị ka ndị nchịkwa. Ya mere, anyị ga-agbaso otu usoro ahụ anyị gbasoro na mbụ. Yabụ na anyị ga-enwe njikwa iwu a dị na ihuenyo.
Mgbe emepere windo a, anyị ga-abanye iwu nrụpụta netsh winsock na ya wee pịa Tinye. Ọzọ, netsh int ip reset iwu abanyela wee pịa Tinye ọzọ. Ozugbo nke a mere anyị na-emechi a iwu ozugbo window na anyị malitegharịa kọmputa ahụ. Ihe kachasị mma bụ na mgbe emechara nke a, a na-emezigharị nhazi IP, nke mere na nsogbu nhazi ndị dịbu adị na-apụ n'anya kpamkpam. Ugbu a, anyị ga-enwe ike ijikọ na ịntanetị nke ọma.
Wepụ ọkwọ ụgbọ ala ikuku ikuku
Ozi njehie nke na-ekwu WiFi enweghị ezigbo nhazi IP enwere ike bute ya site na onye ọkwọ ụgbọ ala netwọk mejọrọ ma ọ bụ emechiela ya. N'ọnọdụ ndị a, ihe ị nwere ike ịnwale bụ iwepụ onye ọkwọ ụgbọ ala ikuku ikuku wee hapụ usoro ahụ tinyegharịa ya na-akpaghị aka oge ọzọ ịmalite usoro ahụ. Nke a bụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma na nke na-edozi njehie kwuru.
Ihe mbụ anyị ga-eme na nke a bụ imeghe Device Manager na kọmputa. Anyị nwere ike ime ya site na nchọta ọchụchọ na taskbar wee mepee nsonaazụ na-ekwu Onye njikwa ngwaọrụ. N'ime onye nchịkwa a, ị ga-achọ ihe nkwụnye netwọkụ wee gosipụta ha, ka ịhụ ihe niile dị. Chọta onye njikwa ikuku wee pịa ya ozugbo. Na ndọpụta menu nke na-egosi, pịa nhọrọ iwepụ. A ga-agwa anyị ka anyị kwado nke a wee pịa OK. I kwesịkwara ịlele igbe na-ekwu Hichapụ software ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ a.
Mgbe ahụ, anyị ga-amalitegharị kọmputa ahụ, ka mgbanwe ndị a anyị tinyeworo n'ọrụ ga-amalite. Mgbe ịmalitegharị kọmputa gị ọzọ, Windows kwesịrị ịchọpụta na i wepụla ọkwọ ụgbọ ala a, mgbe ahụ ọ ga-elekọtakwa ịmalitegharị ọkwọ ụgbọala ahụ. Nke a kwesịrị idozi nsogbu ahụ n'ọtụtụ oge ka anyị nwee njikọ ịntanetị ọzọ na kọmputa Windows anyị.
Jiri aka hazie IP
Ihe ngwọta ọzọ nwere ike ime maka nsogbu a bụ nke ahụ ka anyị hazie adreesị IP onwe anyị aka. Ya bụ, anyị na-agbanwe ụdị ntọala ahụ n'onwe anyị. Mgbe anyị jikọọ na netwọk WiFi, ọ bụ ihe nkịtị ịnye adreesị IP na DHCP na-eme usoro a. Nsogbu na-agwa anyị na nhazi ahụ abaghị uru pụtara na ọ dị ihe ezighi ezi yana na DHCP enweghị ike ịnweta adreesị IP dị mma.
Mgbe ahụ, anyị nwere ike tinye adreesị IP n'onwe anyị nke dị irè ma anyị ga-enwe ike iji aka dozie nsogbu a. Nke a bụ ihe na-ekwesịghị iwe ogologo oge. Anyị pịa aka nri na Malite wee họrọ nhọrọ njikọ netwọkụ. Na mpio ọhụrụ nke na-egosi, pịa nhọrọ Gbanwee nkwụnye nhọrọ, nke na-enye anyị ohere ịhụ ihe nkwụnye netwọk ma gbanwee ntọala ha.
Anyị ga-enwe ike ịhụ ụdị njikọ dị. Yabụ na anyị ga-achọ njikọ ikuku wee pịa bọtịnụ òké aka nri na ya. Na menu gosiputara, anyị ga-abanye Properties. Mgbe ahụ, anyị na-achọ na pịa na nhọrọ nke Usoro ntanetị nke Intanet 4 (TCP / IPv4). Anyị na-eme ka ọ pụta ìhè wee pịa Properties. Na mpio ọhụrụ nke gosipụtara, pịa ma ọ bụ kaa akara nhọrọ Jiri adreesị IP ndị a wee jiri adreesị sava DNS ndị a. Mgbe ahụ, ị ​​ga-edetu adreesị IP, nkpuchi subnet na ọnụ ụzọ ndabara, ihe nkesa DNS masịrị na ihe nkesa DNS ọzọ.
Mgbe ị haziela ma ọ bụ mejupụta nhọrọ ndị a, wee pịa OK iji kwado omume a. Malitegharịa kọmputa gị ka ịhụ ma agbanweela mgbanwe ndị a ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe nkịtị bụ na adreesị IP ọhụrụ a ga-arụ ọrụ nakwa na anyị agaghị enwe nsogbu mgbe ị na-ejikọta na Ịntanetị na PC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Wi-Fi enweghị ezigbo nhazi IP - Nchọpụta nsogbu
Achọrọ antivirus na Windows, ma ọ bụ ị nwere ike ịchekwa nrụnye ahụ?
Otu esi enweta ngafe mbuso agha n'efu na Pokémon Go